ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းကို ရောက်လာနိုင်သေးလား… ဘာ့ကြောင့်လဲ… – MySport Myanmar
ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းကို ရောက်လာနိုင်သေးလား… ဘာ့ကြောင့်လဲ…
ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ အင်္ဂလန် လူငယ် တောင်ပံကစားသမား ဆန်ချို ဟာ မန်ယူအသင်းဆီကို ရောက်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်သေးလား…? ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကတော့ Yes ပါ။ လုံးဝကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာလဲ…? ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဆိုဖို့ အတွက်တော့ အချက်သုံးချက် ကို ထောက်ပြသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချက် သုံးချက်ကတော့ (၁) ဒမ်ဘီလီရဲ့ ဖြစ်ရပ် (၂) ဆန်ချိုရဲ့ နှုတ်ဆက်စကား (၃) မန်ယူအသင်းရဲ့ သဘောထား တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဒီတော့ ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ကို ကျွန်တော်တို့တွေ အတူတူ ရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်…။
(၁) ဒမ်ဘီလီရဲ့ ဖြစ်ရပ်
ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ သုံးသပ်မှုရဲ့ မူလ အရင်းခံဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းအနေနဲ့ ဆန်ချိုဟာ သူတို့အသင်းနဲ့အတူ နောက်ထပ် တစ်ရာသီ ဆက်ရှိနေဦးမယ် ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါပဲ။ ဒေါ့မွန်အသင်း အနေနဲ့ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူချင်ပါက သူတို့အသင်းနဲ့ ၁၀.၈.၂၀၂၀ မတိုင်မီ သဘောတူညီမှု ရဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ တရားဝင် ပြောကြားထားခဲ့ပြီး မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ သဘောတူညီမှု မရရှိခဲ့တဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆန်ချိုဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းမှာ နောက်ထပ် တစ်ရာသီ ဆက်ရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာ သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ တရားဝင် ထုတ်ပြန်မှု ဖြစ်တာကြောင့် မန်ယူအသင်းဟာ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ သုံးသပ်ထားကြပေမယ့် ယခင်က ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ သူတို့အသင်းမှာ ဆက်ရှိသွားမယ်လို့ ကြေညာခဲ့တဲ့ ကစားသမား ကို ရောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ သာဓက ရှိနေပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမား ကတော့ လက်ရှိ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကစားသမား ဒမ်ဘီလီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ ဒမ်ဘီလီကို ခေါ်ယူဖို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးပြီး ဒေါ့မွန်အသင်း ဟာ လိုချင်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး မရတာကြောင့် ဒမ်ဘီလီကို ရောင်းချသွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ် ၂လအကြာမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းဆီ ဒမ်ဘီလီကို ရောင်းချသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ သူတို့ လိုချင်တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုသာ ရပါက ဆန်ချိုကို အချိန်မရွေး လက်လွှတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
(၂) ဆန်ချိုရဲ့ နှုတ်ဆက်စကား
ယမန်နေ့မှာတော့ ဆန်ချိုဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာ ရာသီသစ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်မယ့် ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းနဲ့ အတူ လိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ လိုက်ပါသွားမှုကြောင့် ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မှတ် ရပေမယ့် Independent သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရတော့ ဆန်ချိုဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဆီ သွားမယ့် ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းနဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ အသင်းဖော်တွေကို နှုတ်ဆက်စကားတွေ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆန်ချိုဟာ သူ့အနေနဲ့ မန်ယူအသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့် ရမယ်လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည် ထားတာကြောင့် ဂျာမန်မြေမှာ နောက်ဆုံး ရှိနေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ သူနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း နှုတ်ဆက်ခဲ့သေးတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းဆီကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် လို့ ကောက်ချက်ချလို့ ရပါတယ်။
(၃) မန်ယူအသင်းရဲ့ သဘောထား
အင်္ဂလန်ရဲ့ နာမည်ကြီး သတင်းဌာန ဖြစ်တဲ့ Sky Sports သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရတော့ မန်ယူအသင်းဟာ ဒေါ့မွန်အသင်းက ဆန်ချိုအတွက် ကမ်းလှမ်းရမယ့် နောက်ဆုံးနေ့ရက် လို့ ပြောထားတဲ့ ၁၀.၈.၂၀၂၀ ကို ခေါင်းထဲမှာ ထည့်ထားခြင်း မရှိပဲ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အတွက် တစ်ဆင့်ချင်းစီ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန်ယူအသင်းဟာ အသင်းနှစ်သင်း ထိပ်တိုက် တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေးလိုခြင်း မရှိပဲ အေးဂျင့်တွေကိုသာ ကြားခံအဖြစ် အသုံးချပြီး ဆွေးနွေးနေတဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုလည်း စိတ်ပျက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း မှာ ဒေါ့မွန်အသင်းဘက်က ဆန်ချိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူတို့ဆီကို တရားဝင် ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ရောက်မလာသေးဘူး လို့ ဆိုထားပေမယ့် တကယ်တမ်း မှာတော့ ဒေါ့မွန်အသင်းဟာ ဆန်ချိုရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကို လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ အေးဂျင့်တချို့နဲ့ ချိတ်ဆက် ထားပြီး မန်ယူအသင်းဘက်က ရောက်လာတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်း အေးဂျင့်တွေနဲ့သာ တွေ့ဆုံခိုင်းထားပါတယ်။ ယခု အပြောင်းအရွှေ့ မှာ ဒေါ့မွန်အသင်းဘက်ကနေ အဓိက ဆွေးနွေးနေတဲ့ အေးဂျင့်ဟာ ဒမ်ဘီလီ ၊ အူဘာမီယန်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့တွေ ဖြစ်မြောက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ အေးဂျင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မန်ယူအသင်းဘက် ကတော့ အေးဂျင့်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နှောင့်နှေးမှုတွေ အတွက် အတော်လေး စိတ်ပျက် နေပေမယ့် ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ အရေးကို လက်မလျော့သေးဘူးလို့ လည်း Sky Sports သတင်းဌာနက ဖော်ပြထားပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ဆန်ချိုကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပျနေဆဲ ဖြစ်သလို အပြောင်းအရွှေ့ရာသီ ပိတ်သိမ်းဖို့ဟာလည်း ရက်အတော်များများ ကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့် ဆန်ချိုဟာ မန်ယူအသင်းဆီကို ရောက်ရှိလာနိုင်သေးတယ် လို့ သုံးသပ်လိုက်ရပါတယ်။
MySport Myanmar2020-08-11T11:03:48+06:30August 11th, 2020|Bundesliga, Europa League, Football, Premier League|